टिभी बनाउँन आएका अप्रेटरसँग सम्बन्ध बनाउँदै गर्दा महिला डाक्टर मृ’त – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनटिभी बनाउँन आएका अप्रेटरसँग सम्बन्ध बनाउँदै गर्दा महिला डाक्टर मृ’त
टिभी बनाउँन आएका अप्रेटरसँग सम्बन्ध बनाउँदै गर्दा महिला डाक्टर मृ’त
November 24, 2020 admin मनोरंजन 5709
काठमाडौं। एक महिला डाक्टरको जीवन समाप्त पारिएको छ। भारत, उत्तर प्रदेशमा यस्तो घटना भएको हो। त्यहाँको ताजनागरी आग्राको पोश क्षेत्रमा शुक्रवार दिउँसो एक महिला डाक्टरको जीवन समाप्त पारिएको हो। यो घटनाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सनसनी फैलाएको छ।
परिवारले टिभी ठिक गर्न आएको अपरेटरमाथि आरोप लगाएका छन्। यद्यपि प्रहरीले यस सम्बन्धलाई प्रेम प्रसंगसँग हेर्दैछ। प्रहरी नजिकै सीसीटीभी क्यामेरा खोज्दै छ। एडीजी देखि सबै प्रहरी चौकीको बल घटनास्थल पुगेको छ।
जानकारीका अनुसार प्लास्टिक सर्जन डा. अजय सिंघल कमला नगर इलाकामा बस्दै आएका थिए। उनको डेन्टिस्ट (दाँतको डाक्टर) पत्नी ३८ वर्षीया डा. निशा र दुई बच्चाहरुसँगै थिइन्। परिवारका सदस्यहरूले भने कि अपरेटर शुभमलाई बेलुका बोलाइएको थियो, जब टिभी केबलको समस्या थियो।
शुभम घरमा आए र दुई बच्चाहरूलाई कोठामा बस्न भनेका थिए। यसै बीचमा, शुभम निशासँगै अर्को कोठमा भएको भनिएको छ। केही समयपछि जब निशा चिच्याईन, तब बच्चाहरू बाहिर आएका थिए। बच्चाहरुलाई शुभमले तरकारी काट्न प्रयोग हुने औजार देखाउँदै डराउन खोजेका थिए । प्रहरीले सीसीएसटीभी फुटेजमा शुभम घरभित्र आइरहेको बताएको छ।
स्रोतका अनुसार महिला डाक्टर र शुभम बीच बारम्बार लामो फोन वार्तालाप हुँदै आएको देखिन्छ। प्रहरीले यसको प्रमाण भेट्टाएको छ। केही दिन अघि उक्त महिला डाक्टरले आरोपी शुभमलाई उनको ट्रान्स यमुना क्षेत्रमा मोबाइल शप खोल्न आर्थिक सहयोग पनि गरेकी थिइन्।
स्तब्ध छिमेकीहरू पनि यस सम्बन्धलाई लिएर निशाका पतिले पनि जानकारी पाएको बताउँछन्। पतिले सम्बन्धबारे जानकारी पाएपछि उनीहरुको सम्बन्ध संकटमा पर्न थालेको पनि बताइएको छ। यद्यपि प्रहरीले आरोपितको पहिचानको बारेमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ**
६ बर्षीय बालिकालाई बलात्कारी गरि ह’त्या गर्ने ह’त्या’राको घर हेर्दाहेर्दै स्थानीयवासीले यसरी पुरै ध्वस्त भयो,अब बलात्कारीलाई गाउँलेले यत्तिकै नछाड्ने, सिदै गोली ठोक्न माग, हेर्नुहोस् भिडियो !
त्यस्तै एउटा कार्य जgle्गलमा गरिएको थियो। (पूर्ण भिडियो हेर्नुहोस्)
November 23, 2020 admin मनोरंजन 8330
देउरानी सम्झा (नाम परिवर्तन) र शान्तीनगरमा बस्ने उनकी जेठी बहिनी एन्जेला (नाम परिवर्तन) सँग राम्रो सम्बन्ध थियो। परिवारमा कसलाई आदर गर्ने भनेर उनीहरूले बहस गर्न शुरू गरे। जब उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो थियो, तिनीहरू एक अर्काको
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, भिडियो, मनोरंजन, समाचार 101552
April 22, 2021 admin मनोरंजन 8427
जनकपुर धामको रेल्वे स्टेशनमा दिउँसो एक युवकले आफूसँग पैसा लिएर पनि यौ८ न स म्प र्क गर्न नदिएको भन्दै कु ट पि ट गरेको बताएका छन् । युवकका अनुसार शनिबार साँझ नै उनीसँग १५०० रुपैयाँ